Ukuqeqeshwa kwezinja, izinhlobo nezisekelo | Izinja Umhlaba
Ukuqeqeshwa kwezinja, okufanele ukwazi
USusy fontenla | | Ukuziqeqesha, Izinja ezijwayelekile
Lapho sizoletha inja entsha ekhaya kufanele sicabangele zonke izici futhi esinye sazo siseqinisweni lokuthi kuzofanele siyinikeze imfundo, esizoyisebenzisela yona ukuqeqeshwa kwezinja. Lokhu kuqeqeshwa kuyingxenye ebalulekile yempilo yezinja, ngakho-ke kufanele okungenani sibe nemibono ethile.
Sizokhuluma ngokuqeqeshwa, izinhlobo zokuqeqeshwa nokuthi yini okufanele siyenze ukuqeqesha inja. Kuyingxenye ebaluleke kakhulu yokukunikeza imfundo enhle.
1 Izisekelo zokuqeqesha izinja
2 Ukuqeqesha nokufundisa
3 Izimpawu zokuzola
7 uhlelo lwezikhathi
10 Qeqesha ngokuqinisa okuhle
Izisekelo zokuqeqesha izinja
Uma kukhulunywa ngokufunda ngokuqeqeshwa kwezinja, kufanele cacisa ngeminye imibono eyisisekelo lokho kusisiza ukuthi siqonde izindlela eziningi esinazo zokuthola ukuqeqeshwa okuhle kwesilwane sethu. Ngale ndlela sizokwazi ukusebenzisa eyodwa noma enye futhi sizokwazi ukuthi senzani nokuthi singakwenza kanjani, ngoba ayikho indlela eyodwa kuphela noma inqubo evumelekile yokuqeqesha inja.
Ukuqeqeshwa kuyefana nokufundiswa kwezinja kepha akufani ncamashi. Uma sikhuluma ngemfundo ye-canine, sibhekisa ekufundiseni inja yethu imithetho ethile yokuhlalisana nokuxhumana nemvelo yayo, engenziwa ngamasu athile okufunda. Endabeni yokuqeqeshwa kwe-canine siqhubeka kancane, ngoba inja ingafundiswa, kepha ayiqeqeshelwa izimfanelo ezithile. Ukuqeqesha kuyinto ukuqeqeshelwa inja ukuthola amakhono athile noma angenza izivivinyo ezithile. Kungumqondo obanzi futhi ophelele kunemfundo.
Izinja zinolimi lwazo futhi lokhu kufanele sifunde ukukuhumusha uma sifuna ukuxhumana nazo. Sivame ukucabanga ukuthi yibo okufanele bazivumelanise nathi, kepha ukwazi ukuthi bakhuluma kanjani kuzosisiza ukuthi sithuthukise izikhathi zokuqeqesha kanye nokuhlala ndawonye. Izinja zikhipha izimpawu ezizolile ukusikhombisa ukuthi banengcindezi ngokuthile futhi bafuna sehlise umoya. Zingaba yizimpawu ezahlukahlukene, njengokuhogela phansi, ukubheka eceleni, ukukhombisa isisu, ukuzamula noma ukukhotha isifonyo. Ukuthola ukuthi ngabe yi- uphawu oluzolile kufanele sibheke umongo futhi ngaleyo ndlela sizokwazi ukuthi singaxhumana kanjani nabo.
Ukubambezeleka yi isikhathi esidlula phakathi kokunikeza i-oda nenja ikwenza. Uma sikwenza kahle ukuqeqeshwa, lesi sikhathi sokubambezeleka sizoba ncane futhi size sisheshe. Lesi sikhathi siyindlela yokukala inqubekela phambili lapho siqeqesha inja yethu, ngakho-ke kuyinto okufanele siyilinganise uma sifuna ukucacelwa ngenqubekela phambili esiyenzayo uma kwenzeka izinja zinokufunda okunzima.
El i-clicker ithoyizi lokuqeqesha okukhombisile ukuthi kuyasebenza kakhulu. Lokho ekwenzayo kumaka isimilo sokuziphatha esifiselekayo enjeni ukuze ikwenze kaninginingi. Umsindo ocacile futhi omfushane wokuchofoza usiza inja ukuhlukanisa lezo zimilo ezifiselekayo. I-clicker ijwayele ukusetshenziswa lapho lokhu kuziphatha kwenzeka futhi umvuzo usetshenziswa ngemuva kokuchofoza. Ngale ndlela inja ihlobanisa lo msindo nokuthile okuhle futhi yenza isimilo ukuthola umsindo wokuchofoza. Luhlobo lokuqeqeshwa okuhle.
El ukuqinisa kungaba kuhle noma kube kubi. Ukuqiniswa okuhle kungumvuzo esiwunikeza inja lapho yenza isimilo esifunekayo ukuze iyiphinde. Umuthi kufanele unikezwe ngokushesha ngemuva kwalokho ukuze inja ikhulume ngalokhu. Endabeni yokuqiniswa okungekuhle, yize kungelona uhlobo olufanele lokuqeqeshwa, kumayelana nokunikeza isijeziso lapho wenza isimilo esibi ukuze ungasiphindi.
El isikhathi yisikhathi esidlula phakathi kwenja eyenza isimilo nokwamukela ukuqiniswa. Isikhathi kufanele sibe sifushane kakhulu ukuze inja yazi ukuthi iziphi izindlela zokuziphatha ezizophindwa. Akufanele idlule imizuzwana emihlanu futhi sikhuluma ngokusebenzisa okuchofoza noma ukunikeza umklomelo.
Lona akuyona indlela yokufunda efiseleka kakhulu, ngoba uma sisebenzisa ukuqinisa okuhle inja izolinganisela ngokwengeziwe. Akufanele isetshenziswe ezinjeni ezinokwesaba nama-phobias. Isijeziso siqukethe ukuyeka ukunikeza okuthile okufunwa yinja, njengemivuzo, ukuba isijeziso sokushiya noma ukulungisa lapho inja yenza okuthile okungalungile.
Ukuqothulwa kuqukethe yeka ukulalela inja lapho sifuna ukuthi ayeke ukwenza isimilo esithile. Kubalulekile lapho sazi ukuthi inja yenza okuthile ukuthola ukunakwa, njengokukhonkotha noma ukuhlafuna izinto.
Qeqesha ngokuqinisa okuhle
Le ngenye yezindlela ezinconywe kakhulu lapho uqeqesha inja. Inezinzuzo ezinhle kakhuluNjengoba kungafanele siyigoqe ngokomzimba inja, kuyindlela elula futhi esheshayo futhi emnandi kakhulu ezinjeni, ezenza zisethembe ngokwengeziwe. Kuqinisa ubudlelwane nokubopha phakathi komnikazi nesilwane sakhe.
Ngokuqinisa okuhle esikwenzayo nika inja umvuzo lapho yenza isimilo esifiselekayo, leso esisifunayo kuzo zonke izindlela zokuziphatha okwenziwa yinja. Kufanele sikunikeze lokho kuqinisa ngokushesha lapho senza isimilo, ngoba ngale ndlela inja izohlanganisa lezi zinto ezimbili. Lapho sinika i-oda, inja izofuna umvuzo wayo futhi izokwenza isimilo esesikusizile futhi. Ngokuhamba kwesikhathi kufanele siyeke ukunikeza lowo mvuzo ukuze inja imane yenze umyalo ngoba iwufakile ngaphakathi. Kuhle ukushintsha imivuzo, unikeze ukudla noma ukuphathwa kwezilwane ezifuywayo, ukuze inja ingalindeli okufanayo ngaso sonke isikhathi.
En kukhulunywa kaningi ngokuchofozanjengoba kulula kakhulu izinja ukuqonda lolu hlelo. Esikhundleni sokubheka umklomelo, sisebenzisa i-clicker lapho kuziphatha khona, sikumaka ngendlela elula futhi esheshayo. Yingakho isibe isesekeli esihle sabaqeqeshi.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Ukuqeqeshwa kwezinja, okufanele ukwazi
Ungawasusa kanjani amafindo ezinweleni zenja yamanzi?
Yini okufanele uyenze uma inja yamanzi ikhonkotha kakhulu?